कसरी आईफोन6लाईट अप मा एप्पल लोगो बनाउन आईफोन समाचार
आईफोन light लाईट अपमा एप्पल लोगो कसरी बनाउने
त्यहाँ म्याकबुकको एक धेरै पहिचानयोग्य सुविधा छ जुन धेरैले आईओएस उपकरणहरूमा पनि चाहान्छन्, वास्तवमा हामी त्यस ब्याकलिट एप्पलको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन एप्पलले २०० since देखि उनको ब्रान्ड कम्प्युटरमा राखेको छ। यद्यपि आईफोनको लागि ब्याकलिट स्याउ चाँडै 2009 र s सेकेन्ड देखा पर्न थाल्यो। यसको गिलासको फाइदा उठाउँदै सरल एलईडीहरू प्रयोग गरेर जुन उपकरणसँग काम गर्दछ। अब हामी पत्ता लगाउँछौं कि यो आईफोन and र s एस उपकरणहरूमा पनि सम्भव छ त्यसैले हामी तपाईंलाई थोरै सारांश दिनेछौं कसरी तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ।
म इमानदारीपूर्वक केहि गर्न को लागी सोच्दिन, तर हामीसँग धेरै प्रयोगकर्ताहरू बिहानको सूर्य जस्तो उनीहरूको स्याउ चम्काउने सम्भावनाको बारे उत्साहित छन्। यो कार्यक्षमता पनि धेरै जिज्ञासु छ, त्यसैले हामी यसमा टिप्पणी गर्नेछौं। वर्षौं बर्ष हामी एप्पल राख्न को लागी प्रतीक्षा गर्दै छौं आईफोनमा ब्याकलिट एप्पल, तर यो अहिले सम्म क्रेप्ट छैन। जहाँसम्म, तपाईसँग एक वैकल्पिक, साधारण स्थापना "किट" लगभग जो कोहीसँग उपलब्ध छ जसको भोलि एक बिट स्क्रु ड्राईभरको साथ छ, हामी तपाइँलाई यो कसरी स्थापना गरिएको छ र यसले कसरी काम गर्छ भनेर भिडियो छोड्छौं।
निश्चित रूपमा स्थापना गर्दा तपाईलाई आधा घण्टा भन्दा बढी वा दस मिनेट लिन हुँदैन यदि तपाईं पहिले नै एप्पल उपकरणहरू माउन्ट र अनमाउन्ट गर्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने। € २० भन्दा कममा तपाईं यो किट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन हामीलाई हाम्रो आईफोनको एप्पल रोशन गर्न अनुमति दिनेछ त्यसोभए हामीसँग पक्कै पनि यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै "फेसन" आईफोन छ। जे होस्, हामी यो जान्दैनौं कि यदि यो जोखिमको लागि भुक्तान गर्दछ कि तपाईंले उपकरणलाई केवल यो "सहायक" को लागी चार्ज गर्नुहुन्छ। तपाईसँग यो किनेको र पेशेवर SAT लिने सम्भावना पनि छ, यद्यपि त्रुटि with53 को कारणले उत्पन्न समस्याहरू थाहा पाउँदा हामी पहिले नै अलि राम्रो डराउँछौं जुन हाम्रो आईफोन खोल्ने जोखिममा छ कि हामी एक राम्रो पेपरवेटमा बाँकी छौं। अवश्य पनि, हिम्मत गर्नुहोस्, यो सिक्नको लागि उत्तम हो, र खरीद गरेर तपाईंको आईफोनको एप्पल चम्किलो यो किट अमेजनमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईफोन light लाईट अपमा एप्पल लोगो कसरी बनाउने
यो म सधैं गर्न चाहन्थें! 😀 म यसको अधिक अनुसन्धान गर्नेछु! धन्यवाद!
नमस्कार, म तपाईलाई चिलीबाट पछ्याउँछु।
जब यो एक त्रुटि फेंकको जोखिम चलाउँदैन?
धेरै राम्रो तर म यो गर्न हिम्मत छैन।
तपाईं स्पेनबाट त्यो एक्सेसरी कसरी किन्न सक्नुहुन्छ?
आईफोन or वा for को लागि नोट सप्पल लिनुहोस्
उफ् मेरो आईफोन very धेरै राम्रो हुनेछ, डर एप्पल ले यो ब्लक हुनेछ, र ब्याट्री खपत धेरै हुनेछ? यो राम्रो हुनेछ यदि उनीहरूले यसका फाइदा र विपक्षहरूलाई वर्णन गर्ने नोट बनाउँथे।
तपाईं हुनु पर्छ ..., एक € १००० मोबाइल खोल्नको लागि ताकि ला मन्जनिटामा प्रकाश सकियो…।, मानव असाधारण हो !!!! hehehehe
हाहाहा आन्टोनियो तपाईं सही हुनुहुन्छ, तर यदि तिनीहरूले यसमा सूचना राख्छन्, उपकरणले १०० डलर बढी उठाउँदछ किनकि यो यस्तो एलईडी हो जुन पहिला कहिल्यै देखिएको थिएन र त्यो प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिदैन (यो इल्ट हुनेछ) त्यसैले उनीहरूले बेच्छन्। हामीलाई महँगो सेल फोन हाहाहा
यदि उनीहरूले तपाईंलाई केहि पठाएमा वास्तवमा स्क्रिन खोल्दछ, र यदि तपाईं केहि नेतृत्वको चाहानुहुन्छ भने तपाईं फ्ल्याश बन्द गर्न सक्नुहुनेछ जुन मलाई लाग्छ। कमसेकम कलको साथ
धेरै राम्रो म तपाईंलाई बधाई दिन्छु त्यो उत्कृष्टको साथ।
एडगर डुआर्ते भ्यालेन्जुएला भन्यो
शुभ प्रभात, म कसरी मेरो आईफोनमा एक व्हाट्सएप सन्देश शेड्यूल गर्छु मिति र समयमा पठाउन जुन प्रयोगकर्ताले चाहान्छ।
Edgar Duarte Valenzuela लाई जवाफ दिनुहोस्
एफबीआई आग्रह गर्छ कि एप्पलले एप्पल आईडी परिवर्तन गरे पनि मद्दत गर्दछ
Comunimar अनुप्रयोग आईओएस अनुप्रयोग स्टोरमा पुग्छ